संविधान संशोधन केमा, केका लागि किन गर्ने ? थाहा पाएको छैन: अध्यक्ष ओली-NepalKanoon.com
संविधान संशोधन केमा, केका लागि किन गर्ने ? थाहा पाएको छैन: अध्यक्ष ओली
"संशोधनमा सहयोग गर्न प्रधानमन्त्रीको ओलीलाई आग्रह"
काठमाण्डौ: प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको भेटमा संविधान संशोधनमा साथ दिन आग्रह गरेका छन् । एमालेलाई समेत मान्य हुने गरी प्रस्ताव तयार पार्ने भन्दै प्रचण्डले साथ दिन आग्रह गरेका थिए । ओलीसँग प्रचण्डले भने, ‘म अब संविधान संशोधनमा अगाडि बढ्न लागेँ, तपाईंको सहयोग चाहियो ।’ जवाफमा ओलीले प्रस्तावको अन्तर्वस्तुका आधारमा मात्र एमालेले आफ्नो धारणा बनाउने बताएका थिए ।
ती जिल्ला अन्यत्र लैजान खोजिए आन्दोलन गर्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् । ‘एउटा प्रदेशका तीन जिल्लालाई अर्कातिर लैजाने हो भने अर्कोतिरका जिल्ला कतै पनि लैजान हुन्न भन्ने तर्क कसरी पुष्टि हुन्छ रु’ एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले भने । नयाँ पत्रिका